Nwa nwanyi Krismas mara mma Loli 145 cm Ihe Mmekọahụ Doll Darlene Morris
Nwa bebi TPE,Ewepụghị obi nwa bebi mmekọahụ,B iko ụmụ bebi mmekọahụ
Brown Curly Hair Christmas Girl 145CM Darlene Morris Entity TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Save 12%$ 1,836.00$ 2,073.47
Darlene nwere nnukwu agụụ ma nwee anyaukwu. Ihe kasị amasị ya bụ iri nri. Ihe oriri kachasị amasị bụ "anụ ọkụ" na "sashimi" yana dịkwa ka "strawberry buffy". Mgbe ọ bụla ọ na-eche ma ọ bụ na-ekwu okwu, ọ na-ewepụta onwe ya mgbe niile okwu metụtara nri.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nwa agbọghọ na-anụ ụtọ, nke na-erube isi ka ọ bụrụ nwa agbọghọ gị, ọ bụ ezigbo nhọrọ. Nwoke ọ bụla ga-enwe mmasị na ya mara mma ihu na-adọrọ adọrọ styling. Ọtụtụ mgbe, owu ọmụma ga-eme ka ị ghara ịnọ ndị mmadụ nso, ụmụ bebi na-eto eto nwere ike inyere gị aka inwe mmetụta na a hụrụ gị n'anya.
"Achọrọ m ịjụ, ezinụlọ gị ọ nwere osisi Krismas, Santa Claus ọ ga-alaghachi n'ụlọ gị? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, m ga-enwe nnukwu ọ beụ ịla n'ụlọ gị," Darling kwuru.
Ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị ihe. Ugbu a ọ ka na-eto eto. Ọ naghị aghọta mmekọahụ, mana ọ na-achọ ịmata ihe gbasara ya. Nanị nghọta ya banyere mmekọahụ bụ site na telivishọn na Intanet. Ekeresimesi oyi a bụ ụbọchị ọmụmụ 19th nke Darlene Morris. Ọ chọghị inwe ụbọchị ọmụmụ ọzọ. Ọ na-achọkarị ikpo ọkụ ị na-ebute n'ụlọ. Nye ya ohere ka ọ lekọta ma too. Ọ bụ naanị gị abụọ nwe ụwa a.
Ọ bụ ezigbo nwa bebi. Ogologo agba aja na-apụta ma dị ọcha na-enwu gbaa nnukwu anya. Ekeresimesi a bụ afọ iri na iteghete ọ na-eme ncheta. Nke a bụ ọmarịcha nwa bebi mara mma nke nwere ogo 19 cm, bust nke 145 cm, eriri gburugburu 80 cm na okpu ukwu nke 51 cm. A na-eji akpụkpọ anụ TPE eme ya akpụkpọ ahụ, na-enye gị ohere ịnweta ahụkarị aka. Kpọrọ ya laa, ị gaghị akwa ụta.
1 * nwa bebi
1 * mkpanaka ahu n’adighi okpomoku
1 * onye na-amị amị
1 * uwe aka
1 * ntuziaka ntuziaka
Elu ： 57 sentimita (145cm)
Ibu ibu ： 63 lbs (28.7kg)
Bust ： 31 sentimita (80cm)
N'úkwù ： 20 sentimita (51cm)
N'úkwù ： 33 sentimita (83cm)
Ogwe aka: 18.5 sentimita （47cm）
Lengthkwụ ogologo: 8.1 sentimita （20.5cm）
Ichikota 55.2*17*11.1 inches（140*43*28cm）
Queena - Nnukwu ara na-emecha mara mma 168CM TPE Love Doll
Nkwa anyị: * A na-ebupụ ngwaahịa ọ bụla na-edina ụmụaka n'efu. Enweghị ụgwọ zoro ezo. * Igbe pụrụ iche maka ịchekwa na ibugharị ụmụ bebi mmekọahụ. Ndị ọzọ enweghị ike ịmata ya dị ka nwa bebi site na mpụga - ichebe nzuzo gị. * Ezigbo nwa bebi anyị bụ silicone ahụike na-adịghị emerụ ahụ (...)
Louise - Nnukwu Anụ Nnukwu Assnyịnya ibu 171CM TPE Dolhụnanya nwa bebi
PIPER platinum silicone mmekọahụ nwa bebi: 1. Free hyper-ezi uche etemeete; 2. Nweta nkwalite nke EVO ọkpọ; 3. Free nweta nkwalite ibughari eyeballs, inogide etemeete; 4. Nweta nkwalite nke ara jelii (Na-enwe mmetụta dị nro na nke ọma); 5. amfụfụ liner ndochi iji belata ibu; 6. Enwere ihe n’elu n’elu (nko n’efu); 7. ...
Hilary - 156CM Ndụ Ogo Anime Mmekọahụ Mmekọahụ B -iko Japanese WM NO153B ...